China TOA130 mepere emepe ụdị weld isi ụlọ ọrụ na ndị na -ebubata ya. AEON
TOA130 bụ otu ụdị nke usoro TOA Mepere emepe Ụdị Weld. Ọ na -ekpuchi oke ọkpọkọ OD sitere na 38.1mm - 130mm. A tụpụtara isi ịgbado ọkụ ụdịdị dị ka ngwa ọrụ ịgbado ọkụ TIG na -enweghị eriri ma ọ bụ na -enweghị. Isi ịgbado ọkụ nke TOA nwere ọrụ AVC/OSC ma na-ejikarị ya na mgbidi siri ike (3mm-16mm) ka ọ bụrụ ọkpọkọ/ikiaka/flange ịgbado ọkụ. Dayameta nke ọkpọ ndị a ga -agbakọta na -ekpuchi oke site na 38.1 mm ruo 130 mm.
Nkenke, kwụsiri ike ma na -adịgide adịgide;
Ọ dị mfe ijikọ na ọkpọkọ nwere mkpọchi mkpọchi dị elu;
AVC Motorized ọrụ & OSC;
Ezi eriri nri akara;
Onye ọkachamara ịgbado ọkụ maka ịgbado ọkụ ọkpọkọ mgbidi;
Circuit jụrụ mmiri mmiri;
A tụpụtara isi weld weld TOA dị ka ngwaọrụ maka ịgbado ọkụ TIG na -enweghị eriri ma ọ bụ na -enweghị ya. Dayameta nke ọkpọ ndị a ga -agbakọta kpuchiri site na 19.05 mm ruo 324 mm (ANSI 3/4 "ruo 12 3/4"). A na-eji isi weld ụdị oghe nwere TIG-torch na gas diffuser. A na -enweta nchekwa gas zuru oke naanị na mpaghara dị n'akụkụ ọwa nke mkpuchi mkpuchi na -esi na oghere gas na -apụta. N'oge usoro ịgbado ọkụ, onye na -ahụ maka ọrụ nwere ike ilele ma chịkwaa ya.
TOA pipe to weld weld head bụ ụdị imewe caliper, ọ dị mfe ijikọ na ọkpọkọ, dịkwa mfe ịhazigharị maka dayameta dị iche iche. Ihe na -eme ka caliper na -emegharị elu ọkpọkọ iji hụ na ịdị n'etiti etiti ọkpọkọ na ịgbado ọkụ. Isi weld weld TOA nwere ọrụ AVC na OSC dabara na nnukwu mgbidi CS, SS na ihe ndị ọzọ, ha na-aghọta usoro ịgbado ọkụ nke ọtụtụ na ọtụtụ. Onye na -enye ihe ntanetị nke isi ịgbado ọkụ TOA nwekwara njikwa njikwa loop ka ọ nwee ike ijikwa ọsọ inye nri waya, inye nri enweghị eriri gbagọrọ agbagọ iji nweta nri waya kwụsie ike iji nweta ezigbo ọdịdị mgbe ịgbado ọkụ. Enwere ike iji isi ịgbado ọkụ TOA n'okpuru njikọta ma ọ bụ inye nri waya, a na -ejikarị ya eme ihe na ọkpọkọ na ọkpọkọ na nke dabara. Ọzọkwa, mmiri jụrụ oyi na-eme ka arụ ọrụ ogologo oge na-aga n'ihu
Carbon ígwè / Igwe anaghị agba nchara
Φ 3.2 ọkọlọtọ
Ọsọ ntụgharị (rpm)
Ọkpụkpụ OSC (mm)
Ọkpụkpụ AVC (mm)
Max. ọsọ waya
Nke gara aga: TOA77 ụdị weld isi
Osote: TOA180 isi ụdị weld isi
TOA77 ụdị weld isi
TOA180 isi ụdị weld isi
TOA230 isi ụdị weld isi
TOA320 isi ụdị weld isi